Vaovao - WOCA Forum 2020: Nanao lahateny i Richard, filohan'ny Ashine
WOCA Forum 2020: Richard, ny filohan'ny Ashine, dia nanao kabary
13: 00-14: 00 B01 Salon Area ao amin'ny W3 Hall, Andriamatoa Richard Deng, filohan'ny Ashine Diamond Tools Co., Ltd. dia nanao kabary momba ny "Application of Diamond Tools on Grinding Stones and Wear-resistant Hardened Floors" . Voalohany, nanontaniany ny mpanatrika hoe inona ny olana lehibe sy ny alahelo atrehin'ny matihanina eo amin'ny sehatry ny famolahana sy ny famolavolana ny gorodona tsy mitongilana miaraka amin'ireo vokatra mifaninana? Avy eo dia natolony ny dingana rehetra sy ny tombony azo amin'ny vahaolana avo lenta avo indrindra, ary ampahafantariny amin'ny antsipiriany ny fomba nanomezan'i Ashine vahaolana avo lenta avo lenta ho an'ny olana lehibe tsirairay (ao anatin'izany ny fahasarotana amin'ny fametahana sy ny fanesorana ny gorodona, ny poloney ambany ary ny gloss, sns.). Andriamatoa Richard dia naka tetikasa manokana ho ohatra amin'ny fanaovana kajy ny vola lany amin'ny fikolokoloana kapila, ny karaman'ny mpiasa, ny saram-pitantanana ny tetikasa ary ny saram-pitantanana ny orinasa amin'ny fikolokoloana sy ny fanaovana poloney; ary ny valiny dia mampiseho fa ny fampiasana ny vahaolana fikosoham-bary mahery vaika tena mahavariana dia tsy mampihena be ny vidiny ankapobeny fa afaka mamonjy fotoana be dia be, ary mamita ilay tetikasa aloha kokoa. Ny filoha Deng dia nandinika ihany koa ny vahaolana manaitra amin'ny ankapobeny ho an'ny gorodon'ny vato fikosoham-bolo ary ny vahaolana famolavolana telo-dingana mahavariana ho an'ny gorodona mihamafy hatoka. Ampirisihina mafy ianao mba hanana teti-bola feno alohan'ny tetikasa. Betsaka ny olona amin'ny tany izay vonona hianatra no mivory ao amin'ny salon. Manantena izahay fa hisy fotoana bebe kokoa hifanakalozana amin'ny ho avy!
2020 WOCA dia nanangana "Enterprise Communication Salon & Engineering Exhibition Area" vaovao, izay mikendry ny hanampy marika ambony kalitao amin'ny indostria hizara vokatra sy zava-bita teknika, ary hampiroborobo ny vokatry ny orinasa fampirantiana; misaotra ny WOCA fa nanome sehatra hizarana sy hifanakalozan-kevitra malalaka.
Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kiraro fitotoana PCD, Kiraro fanaovana diamondra, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Pads polishing vita amin'ny beton, Kiraro fitotoana beton,